Dabaqa Ecomomic laminate EIR saaraha iyo qeybiye Taxanaha EIR | Moyo
4.5mm aan siibasho lahayn guji vinyl ...
Dabaqa Laminate Waayo, ...
dabaqa laminate ee parquet ...
Dabaqa Ecomomic EIRom ...
Dabaqa Ecomomic laminate EIR Taxanaha
Cabbirka: 1220X170mm,1220x200mm, 810X150mm
Dhumucdiis: 8mm 10mm 10.5mm 12mm
Dabaqyada dahaarka ah waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa sagxadaha alwaaxa, in kastoo ay yihiin alwaax laba dhinac oo kaliya. Marka hore, salka dabaqa laminate wuxuu ka kooban yahay walxo alwaax la jeexjeexay. Midda labaad, xagga sare waxay leedahay muuqaalka alwaax dhab ah sababtuna waa lakabka sawirka saxda ah-asal ahaan waa sawir si fiican loo bixiyay oo alwaax ah oo ku dhex jira lakab duug ah oo cad oo waara.
Qaybaha alwaax ee la isku daray ayaa lagu cadaadiyaa cadaadis sare si ay u sameeyaan xaashiyo. Waraaqahaasi waxay leeyihiin sawir sawir -qaadis ah oo qoryo ama dhagax ah oo dusha lagu daray, sawirkaanna waxaa lagu daboolay lakab duug ah. Lakabka xirashada, xaashi caag ah oo waara, dhuuban, oo cad, waa linchpin u dhexeeya lakabyada hoose ee jilicsan iyo walxaha dibadda sida qoyaanka, shucaaca UV, iyo xoqidda.
Xidho Lakabka:Dabaqa dahaarka ah waa lakab dusha sare ah oo ka kooban laba xaashi oo khafiif ah oo lagu dahaadhay melamine. Lakabkaan dusha sare ugu sarreeya ayaa ah nooc adag oo hufan oo ah caag balaastiig ah oo aan u dulqaadan karin eeyaha, kuraasta, cidhibta dhaadheer, iyo walxaha kale ee waxyeellada leh.
Lakabka Sawirka: Xitaa marka la fiiriyo sagxadda dahaarka ee u dhow waxay u ekaan kartaa mid dhab ah. Tan waxaa u sabab ah sawir-tayo-sawir leh oo tayo leh oo ah alwaax dhab ah oo ka hooseeya lakabka xirashada.
Lakabka Saldhigga (Muhiimka):Sawirka alwaax hoostiisa wuxuu ku saabsan yahay nus inji oo ka kooban alwaax-qoryo. Nooc kasta oo ka mid ah wax -soo -saarka qoryaha ayaa asal ahaan u nugul dhaawaca biyaha. Saldhigga sagxadda dahaarka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid deggan, laakiin ilaa xad. Waxay is hor taagi doontaa xoogaa biyo ah, laakiin waa haddii biyahaan si degdeg ah looga saaro.
Laminate ma u fiican yahay deegaanka?
Jawaabta su'aashan waxay ku xiran tahay qeexiddaada sagxad-saaxiibtinimo, laakiin haa-guud ahaan, haa! Laminate waa mid ka mid ah dabaqyada bey'adda u fiican.
Taasi waa sababta oo ah waxay u isticmaashaa agab dabiici ah (fiberboard ama plywood) lakabka asaasiga ah, iyo qadar aad u yar oo ah walxaha dardaro ee lakabkiisa duugga. Taas macnaheedu waa inta badan dib loo warshadeyn karo.
Marka la barbardhigo vinyl, tani waxay ka dhigaysaa laminate doorasho aad u badan oo ku habboon deegaanka. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee sagxadda vinyl waa in laga sameeyay gebi ahaanba caag. Tani waxay ka dhigan tahay, marka laga reebo qaar ka mid ah magacyada yaryar sida Proximity Mills, runtii guud ahaan dib looma adeegsan karo.
Hore: Musqusha caagga ah ee xaashida baasaboorka pvc ee gudiga saqafka
Xiga: dabaqa laminate ee midabada parquet
Dabaqa Laminate ee Jumlada iyo taxanaha caadiga ah
dabaqa laminate ee midabada parquet
Ku Soo Dhawow La -tashiga
Ma taqaan dhammaan noocyada sagxadda dhulka?
Saddex dhibcood oo dabaq ah, toddoba dhibcood oo rakibid ah, dadka badankoodu way iska indha tiraan tafaasiishaan rakibaadda dabaqa!
Xushmad u leh dalka hooyo: Dhalasho wacan Xisbigeenna Shuuciga ah ee Shiinaha
No.67, Qilian Street, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha.